တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မြင်တွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(PLA)၏ တပ်မတော်အဆင့်မြှင့်တင် ရေးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းများတွင် တိုး တက်မှုများကို လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါသည်။
မတည် ငြိမ်မှုများနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း၌ ကူးစက်ရောဂါ COVID-19 မှ တရုတ်နိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံ သားများကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်း မကြာသေးမီ အချိန်က တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်-အိန္ဒိယနယ်စပ်၊တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြားတို့ကဲ့သို့သော တင်းမာမှုများရှိနေသည့် ဒေသများအတွင်းရှိ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ လျှပ်စစ်တွန်းအား ပေးစနစ် ဖြင့် အသစ်ထပ်မံတည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ထားသော ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောသစ်၊လေယာဉ် တင်သင်္ဘောသုံး ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်များ စသည်ဖြင့် ထို့ထက်ပိုသော ခေတ်မီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအသစ်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပွဲထုတ်လာနိုင်ကြောင်း စစ်ရေး လေ့လာအကဲခတ်သူများက ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၇ ခုနှစ်အမီ စစ်တပ်အတွက် ရာစုနှစ်ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ကာ စစ်ပညာနှင့် စစ်နည်းဗျူဟာသီအိုရီများ၊ဖွဲ့စည်းပုံ၊တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊စစ်လက်နက် ပစ္စည်းကိရိယာများ အား လုံး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းသစ်များကို လာမည့်နှစ်များအတွင်း ဆက်လက်တီထွင် ထုတ်လုပ်သွားလိမ့်မည်ဆိုသည်ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါချေ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၂ စီးထက် ပိုမို အရွယ်အစားကြီးမားမည်ဟု အတော်များများက ခန့်မှန်းထားကြသော အဆင့်မြင့်လျှပ်စစ် သံလိုက်လေယာဉ် လွှတ်တင်သည့်စနစ် (electromagnetic catapult system) အသုံးပြု လာနိုင်မည့်
တည်ဆောက်နေဆဲ တတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအား နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာ အတော်များများမှ အာရုံစိုက်နေကြပါသည်။ပေကျင်းအခြေစိုက် ရေတပ် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ Li Jie က ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် အဆိုပါတတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တပ် တော်ဝင်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Type 054A ဖရီးဂိတ်ထက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် လျှပ်စစ်တွန်းအားပေးစနစ် တပ်ဆင် အသုံးပြုထားသော Type 054B ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်သစ်ကြီးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တွေ့မြင် ရတော့မည်ဟု အမည်မဖော်ပြလိုသော အတွင်းသတင်းများကို ကိုးကား၍ Diplomat မဂ္ဂဇင်းက အစီအရင်ခံတင်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါသတင်းတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အကြား တရုတ်နိုင်ငံသည် Type 054A ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောများ၊ Type 052D ဖျက် သင်္ဘောများ၊ Type 055 ဖျက်သင်္ဘဘောအကြီးစားများ၊ Type 071 ကမ်းတက် သင်္ဘော များနှင့် Type 075 ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောများကို ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ် တပ်တော်ဝင်အသုံးပြုသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ရေးသားထားပါသည်။ Type 075 ကမ်းတက် တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောများကတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းအချိန်များမှာပင် တပ်တော် ဝင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြပါသည်။
J-20 ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်သည်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းထုတ်အင်ဂျင်သစ်များနှင့်အတူ တရားဝင်ထုတ်ကြွားနိုင်တော့မည်ဟု စစ်ရေးလေ့လာအကဲခတ်သူများက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်သစ် H-20 မည်သည့်အဆင့် ရောက်ရှိ နေပြီဆိုသည်ကို စစ်ဘက်ဝါသနာရှင်များအနေဖြင့် အသည်းအသန်မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ရ သော သတင်းများထဲမှ တစ်ခုဆိုလျှင် မှားမည်မထင်ပေ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မျက်ဝါးထင်ထင်မြင် တွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆင့်မြင့်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအပေါ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်သတင်းဌာနကပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် Y-20 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ဒိပ်ဒိပ်ကြဲ စူပါစတားအဖြစ် မဲအရေအတွက်အများဆုံးပေးခဲ့ကြပါသည်။ပြည်တွင်းထုတ်ဖြစ်သော အဆိုပါ Y-20 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလနှင့် နောက်ပိုင်း လများတွင်
ဝူဟန်မြို့သို့ ဆေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း များပို့ဆောင်ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို ခေါက်ရေများစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရုံမျှမက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများ ပို့ဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့မှုများကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် လေယာဉ် ကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်ခဲ့သော လက်နက်ကတော့ သင်္ဘောဖျက်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် များဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မကြာမကြာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ ခုတ်မောင်းဝင် ရောက်လာမှုများကြားတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ သည့် လက်နက်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ဇူလိုင်လအတွင်း၌ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် လေယာဉ် တင်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ် ၂ ခုအားတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် တစ်လအကြာ၌ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ရေတပ်လေ့ကျင့်ခန်း များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး DF-26 နှင့် DF-21D သင်္ဘောဖျက်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များစွာ စမ်းသပ်ပစ် လွှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရန်စကျူးကျော်မှုများကို ဟန့်တားစေနိုင်ခဲ့သည့်အချက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မဲအရေအတွက် ၃၄၀၀ ကျော်နှင့် တတိယနေရာရပ်တည်ခဲ့သော လက်နက်မှာ တရုတ်ရေတပ်၏ ပထမဦးဆုံးကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ရေယာဉ် Type 075 ဖြစ်သည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းတွင် ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုများပြု လုပ်ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ၎င်း၏နောက်တွင် မဲအရေအတွက် ၃၀၀၀ နှင့် ကပ်လျက်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် Shandong ဖြစ်ပါသည်။
Shandong လေယာဉ် တင်သင်္ဘောကို ဖျက်သင်္ဘောများခြံရံလျက် ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာအတွင်းကပင် ထိုင်ဝမ်ရေ လက်ကြားသို့ ပုံမှန်မောင်းနှင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Y-8 ဘက်စုံသုံးလေယာဉ်မှာ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတွင် ပုံမှန်ကင်းလှည့်တာဝန်များကို ပြောင်မြောက်စွာထမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မဲအရေအတွက် ၁၅၀၀ ခန့်ပေးထားကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ် တင်းမာမှုများဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်က ကုန်းမြင့်တောင်ပေါ်ဒေသများသို့ တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ရည်မှန်း ချက်တာဝန်များကို မကြာခဏထမ်းဆောင်ခဲ့ရသော Type 15 အပေါ့စားတင့်ကားမှာ မဲအရေအတွက် ၂၈၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၏ အဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံချက်/လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း သိသိသာသာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုအချို့ ရရှိခဲ့ပါသည်။
တရုတ် နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အရေးပါသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပိုင်ဆိုင်ထား ပြီလည်းဖြစ်ကြောင်း ပေကျင်းအခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာအကဲခတ်ကျွမ်းကျင်သူ Wei Dongxu က ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်သို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီများ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ အီလေးဆွဲလျှက်ရှိခြင်းကို တရုတ်စိုးရိမ်ဟု ဆို ( စိုးရမ်နေရင် လည်း သာကောတို့တရုတ်ပြည်ကို လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ပို့ပေးလိုက်မယ် လက်ခံမလား….)
“ထိုင်ဝမ် သူလျှိုတွေရဲ့ ဝန်ခံချက်များ” အစီအစဉ်ကို တရုတ် ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ထုတ်လွှင့် ( “ခြိမ်းခြောက်လာနေတဲ့ တရုတ်ရဲ့အန္တရာယ်”ဆိုပြီး ထိုင်ဝမ်က ကမ္ဘာကို ချတယ် တရုတ်ကလည်း Tv ကလွင့်ပြီး ထိုင်ဝမ်ကို အရှက်ခွဲတယ် ……ညှိတော့ ညှိနေကြပြီ….)
ရက် ၈၀ အတွင်း စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန် ကင်ဂျုံအန်ဆုံးဖြတ် ( ရက်ပေါင်း၃၀ အတွင်းဆိုတော့ ဟုတ်မှလည်း လုပ်ပါ ဝက်ပုတ်ရာ….)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အအေးချိန်လွန်ကဲပြီး ပင်လယ်တွင်းရေခဲမှုကြောင့် မြောက်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ နှေးကွေး